My Freakonomics - Tehirizo amin'ny karama tsara kokoa ny teti-bolanao. Martech Zone
Talata, Jolay 25, 2006 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Vao nahavita namaky aho Freakonomics. Efa elaela izay no tsy nahitako ny boky fandraharahana. Nividy ity boky ity aho tamin'ny asabotsy alina ary nanomboka namaky azy tamin'ny alahady. Vitako minitra vitsy lasa izay. Ekeko fa nandany ny marainako akory aza, ka taraiky hiasa aho. Ny fototr'ity boky ity dia ny fomba fijery miavaka izay Steven D. Levitt maka rehefa mamakafaka toe-javatra izy.
Izay tsy haiko amin'ny saiko, ny tsipelina ary ny fitsipi-pitenenana - Tena mahatoky aho amin'ny fiezahana hijery olana amin'ny fomba fijery rehetra alohan'ny hanomezana vahaolana. Imbetsaka ny olona no namoaka ny vahaolana mety noho ny tsy fandinihako azy rehefa mitady fanazavana bebe kokoa aho. Hatramin'ny fahazazako dia nampianatra ahy ny raiko fa mahafinaritra ny mijery ny zava-drehetra ho ankamantatra fa tsy ny asa. Raha misy lesoka indraindray, dia ny fomba itondrako ny asako amin'ny maha-Product Product Manager ahy. 'Fahendrena mahazatra' dia toa fahendrena anatiny ao amin'ny orinasanay. Amin'ny ankabeazany, ny olona 'mieritreritra' izy ireo mahalala izay tadiavin'ny mpanjifa ary manandrana mamorona ny vahaolana mety. Ny ekipa napetrakay ankehitriny dia manontany an'io fomba io ary tena manafika ireo olana amin'ny alàlan'ny firesahana amin'ireo mpiara-miombon antoka rehetra, manomboka amin'ny varotra ka hatramin'ny fanohanana, hatramin'ny mpanjifa ka hatramin'ny efitranontsika. Ity fomba fiasa ity dia mitondra antsika amin'ny vahaolana manararaotra mifaninana ary mihaona amin'ny mpanjifa noana fampiasa. Olana isan'andro ary miasa mankany amin'ny vahaolana. Asa be io!
Ny 'Freakonomics' manokana nataoko manokana dia nitranga rehefa niasa tamin'ny gazety iray tany atsinanana aho. Tsy mifanaraka amin'ny olona mamirapiratra toa an'Andriamatoa Levitt aho; na izany aza, nanao fanadihadiana mitovy amin'izany izahay ary nahita vahaolana izay nanilika ny fahendren'ny orinasa mahazatra. Tamin'izany fotoana izany dia nanana olona tapa-potoana maherin'ny 300 izahay nefa tsy nahazo tombony ary ny ankamaroany dia karama farafahakeliny na ambony fotsiny. Nampihoron-koditra ny fihodinanay. Ny mpiasa tsirairay sy ny tsirairay dia tsy maintsy nampiofanin 'ny mpiasa iray hafa ary nandany herinandro vitsivitsy vao tonga tamin' ny dingana mamokatra. Izahay dia nandinika ny angon-drakitra ary nanondro fa (tsy mahagaga) fa misy ny fifandraisana amin'ny faharetana handoa. Ny fanamby dia ny fitadiavana ny 'toerana mamy'… fandoavana karama ara-drariny ho an'ny olona izay tsapan'izy ireo fa hajaina, sady manome antoka fa tsy notsofina ny tetibola.
Tamin'ny alàlan'ny famakafakana be dia be no nahafantaranay fa raha mandany $ 100k izahay dia afaka mamerina $ 200k amin'ny vidin'ny karama fanampiny ho an'ny ora fanampiny, ny fivezivezena, ny fiofanana sns ... Ka… afaka nandany $ 100k izahay ary nitahiry $ 100k iray hafa… faly ny olona! Namboarinay ny rafitra fampitomboana karama misy ambaratonga izay sady nampiakatra ny karamainay no nanonitra ny mpiasa rehetra ao amin'ny departemanta. Misy mpiasa vitsivitsy izay nanitatra ny laharam-pahamehany ary tsy nahazo intsony - saingy nahatsapa izahay fa voaloa ara-drariny izy ireo.
Ny valiny dia betsaka lavitra noho ny nantenainay. Nanangona $ 250k teo ho eo izahay tamin'ny faran'ny taona. Ny zava-misy dia ny fampiasam-bola amin'ny karama dia nisy fiatraikan'ny domino izay tsy nambaranay mialoha. Nihena ny ora be noho ny fitomboan'ny vokatra, nitahiry vola sy taonina ho an'ny fitantanan-draharaha izahay satria kely kokoa ny fotoana nandraisan'ny mpitantana ny karama sy ny fampiofanana ary ny fitantanana fotoana bebe kokoa, ary ny moraly ankapobeny an'ny mpiasa dia nitombo be. Nitohy nitombo ny famokarana raha nahena ny vidin'ny olombelona. Etsy ivelan'ny ekipanay dia samy nikorapaka ny loha ny tsirairay.
Io no iray tamin'ireo zava-bitako nirehareha indrindra satria afaka nanampy ny orinasa sy ny mpiasa aho. Ny sasany tamin'ireo mpiasa dia tena nampifaly ny ekipan'ny fitantanana rehefa nanomboka nisy ny fanovana. Nandritra ny fotoana fohy dia Rock Star an'ny Mpanadihady aho! Nahazo fandresena lehibe hafa aho tamin'ny asako, saingy tsy nisy nitondra ny fahasambarana nataon'ity iray ity.
Jul 26, 2006 amin'ny 6: 58 AM
Vao avy nahavita Freakonomics ny tenako herinandro vitsivitsy lasa izay. Mahafinaritra ny mamaky ny fomba nanananao ny tantaranao Freakonomics tena izy.
Jul 27, 2008 amin'ny 8: 21 AM
Mahavariana ny fomba ahafahan'ny olona mandray boky tena ilaina sy manan-tsaina nefa mampihatra izany amin'ny fiainany amin'ny fomba mikorontana.
mampahatsiahy ahy ny fampianarana momba ny toekarena intro izay nataoko tamin'ny fahavaratra iray
Nisy vehivavy efa zokinjokiny iray izay nandray ny taranja mba hampiaiky volana ny tenany amin'ny faharanitan-tsaina manokana
Na inona na inona foto-kevitra dia tsy maintsy nampifandraisin'ny rehetra tamin'ny fiainany ny foto-kevitra sy ny zavatra tsara nataony sy ny fianakaviany teo amin'ny fiainany ara-bola sy ara-nofo.
Jul 27, 2008 amin'ny 11: 30 AM
Fomba fijery mahaliana. Tsy nanamafy ny 'fahaizako' tamin'ny boky aho. Izay mahafantatra ahy dia mahafantatra fa lehilahy mahazatra aho. Manantena aho fa hijanona ianao ary hamaky lahatsoratra vitsivitsy alohan'ny hanaovanao fanambarana fohy toy izany.
Ny tanjon'ny boky dia ny hahatonga ny olona hieritreritra ivelan'ny lojika mahazatra. Ny ohatra nataoko etsy ambony dia ohatra tsotra hanamafisana ny fisainana tsy mahazatra. Ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy mino fa afaka mitahiry vola ianao amin'ny fandoavanao vola bebe kokoa - tena manjavozavo izany ary ny asako dia teo amin'ny laharana.
Mirehareha amin'ny zava-bitan'ny ekipako aho tamin'ny nanaovanay izany ary tiako ny hizara izany amin'ny mpamaky ahy.
Ary - eny - manaiky aho fa mitabataba.